Hamehana ara-pahasalamana mitohy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Rasoanjanahary il y a 2 mois
Mitohy 15 andro indray, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin’ny alahady 2 mey, tamin’ny resaka fanaony isaky ny 15 andro halefa amin’ny haino aman-jery. Minisitra efatra (minisitry ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana Lantosoa Rakotomalala, minisitry ny Fahasalam-bahoaka Pr Rakotovao Jean Louis, minisitry ny Fitaterana, ny Fizahan-tany sy ny Famantarana ny Toetr’andro Joël Randriamandranto, minisitry ny Kolontsaina sy ny Serasera Lalatiana Rakotondrazafy) no niaraka tamin’ny filoham-pirenena namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety telo nofantenina ary voafantina (Miora Raharinaina avy amin’ny TVM, Gascar Fenosoa avy amin’ny Real TV, ary Zo Rabarijaona avy amin’ny TV Plus) Naharitra ora telo latsaka fahatelony ny fandaharana tamin’io alin’ny alahady io, nanompanany ny resaka momba ny ady amin’ity aretina ‘coronavirus’ ity. Tsy dia nisy resaka fepetra kosa mahakasika ny fanamaivanana ny fiatrehan’ny vahoaka ny aretina manoloana ny vesatra sy olana samihafa toy ny vidin-javatra ilaina andavanandro tsy mitsaha-midangana, ny hiarenan’ny fihariana ary ny servisin’ny Jirama mbola isian’ny jiro (sy rano) tapatapaka na dia teo aza ny hoe ‘zero delestage’ nambara.
Tsy misy intsony ny sidina avy any ivelany na dia nisy aza ny antony manokana sy maika nampiharana fampodiana olona ary avy amin’ireo no nisian’ny tranga “positif”. Miditra mianatra ny mpianatra manala fanadinana Cepe, Bepc ary Bakalorea. Mitohy ny fikatonan’ny faritra Analamanga, Atsinanana ary Sava. Ary mitohy ny fihibohana tanteraka isaky ny sabotsy sy alahady. Miampy ny an’ny Faritra Matsiatra ambony, Anosy ary Vakinankaratra manomboka ny alarobia 5 mey. Misokatra manomboka ny 3 mey ny any Nosy be sy Boeny. Tsy azo entina mivoaka ireo faritra mikatona ireo izay maty.
Nasongadin’ny filoham-pirenena sy ireo minisitra, indrindra fa ny minisitry ny Serasera, fa mandray ny andraikiny hatrany ny fitondram-panjakana amin’ny ady amin’ity aretina ity. Nanaovan’ny filoham-pirenena fampitahana amin’ny any ivelany toa an’i Inde ny antontanisan’ny tranga eto amintsika. An’arivony isan’andro no maty any Inde, hoy izy, fa ny antsika tsy tonga amin’izany. Misongadina anefa fa nihazakazaka ny tranga tamin’ity taona ity raha mitaha taon-dasa ary tsy mitovy amin’ny any Inde ny isan’ny mponina eto amintsika sy ireo nanaovana fitiliana.
Nahabe resaka teto amin’ny tany sy ny fanjakana ny resaka vaksiny fanefitry ny “covid 19” izay nilazan’ny fitondram-panjakana fa manana ny hahafahana misoroka sy mitsabo ny aretina isika taon-dasa ka tsy mila manafatra vaksiny. Niova miandalana anefa izany araka ny fandehan’ny raharaha ka ny niafarany dia nangataka isika mba hisitraka ny amin’ny programa “Covax” izay hahazoana mamatsy vaksiny maimaim-poana ho an’ny firenena afrikana. Tonga hatramin’ny fidiran’ny fondation tsy miankina matanjaka aza ny hanafarana haingana izany. Nilaza ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny Pr Rakotovao Jean Louis, tao amin’ny TVM tamin’ny alin’ny alakamisy 22 aprily 2021 fa handray ny ampahany voalohany amin’ny vaksiny isika afaka 15 andro. Izany raha ny nambarany dia araka ny dinika tamin’ny mpiara-miombona antoka. Nanamafy ny hahatongavan’ny vaksiny ‘covishield’ amin’ny 7 mey izy tamin’ny alin’ny alahady 2 mey 2021. Olona voafantina no hisitraka io vaksiny io ary an-tsitrapo ny fisoratana anarana ny hanaovana izany.
Fanapahana fandaharana amin’ny radio sy televiziona
Namoaka ‘arrêté’ nosoniavina minisitra 5 tamin’ny 22 aprily 2021 ny fitondram-panjakana momba ny fampiatoana fandaharana lazaina fa mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka sy firaisam-pirenena amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao. Tany anaty tambajotra sosialy FB no namoahana azy voalohany. Voatondro ao amin’ilay didy fanapahana ireto fandaharana ireto: “Aoka hazava” ao amin’ny Viva Radio, “Anao ny fitenenana” ao amin’ny Free FM, “Tambatra miara-manonja tena izy” (Viva Radio, Viva TV, Free FM, Allance FM, Taratra FM, Kolo TV, Kolo FM), “Miara-manonja” (MBS, AZ, Soa radio), “Kapotandroka” ao amin’ny IBC, “L’invité du jour” ao amin’ny Real TV, “Ca me dis” ao amin’ny RTA, “Don-dresaka” ao amin’ny TV Plus, ary “Rivotra” ao amin’ny RDJ. Maro taorian’izany ny tsikera tany amin’ireo haino aman-jery tsy miankina samihafa sy tao amin’ny tambajotra sosialy FB. Misy nilaza fa ny fandaharana ataon’ireo mpanohitra no tena nokendrena tamin’io didy io fa mody nasiana fotsiny ny an’ireo mpanohana ny fitondrana. Maro ihany koa ireo nilaza mazava fa mifanohitra amin’ny lalàna momba ny zon’olombelona mandala ny fahafahana maneho hevitra izany ary nosokajian’izy ireo ho fanampenam-bava. Ny firaisamonim-pirenena sy ny Holafitry ny mpanao gazety dia tsy mankasitraka io didy fanapahana mifanohitra amin’ny lalàm-panorenana eto amintsika io, ka mangataka ny hanafoanana azy.
Niverina tamin’ny fanapahan-keviny ny fitondram-panjakana andro vitsy taty aoriana taorian’ny fihaonana tamin’ny tale sasany amin’ireo voakasiky ny didy fanapahana.